Otú Ndịàmà Jehova Si Mụbaa | Akụkọ Gbasara Indoneshia
Ebe ụmụnna anyị na-ezi mmadụ ozi ọma n’ahịa dị na Jakata
Mgbe ndị isi chọọchị dị iche iche nụrụ na ndị ọchịchị ewepụla iwu ahụ a machibidoro Ndịàmà Jehova, obi jọrọ ha njọ nke ukwuu. N’ihi ya, ihe karịrị narị ndị ụkọchukwu asaa na ndị isi chọọchị Protestant asaa nwere nnọkọ na Jakata. Ihe mere ha ji nwee ya bụ ka ha gwa ndị ọchịchị ka ha weghachi iwu ahụ ha machibidoro Ndịàmà Jehova. Ma, ndị ọchịchị ekweghị eme ihe ha kwuru.
Mgbe ozi bịara ruo ebe niile n’Indoneshia na e wepụla iwu ahụ a machibidoro Ndịàmà Jehova, ọtụtụ ndị nwere mmasị malitere idegara alaka ụlọ ọrụ anyị akwụkwọ ozi ka ha wetara ha akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ma ọ bụ ka a bịa mụwara ha Baịbụl. N’afọ 2003, ihe karịrị puku mmadụ iri anọ na puku abụọ bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs n’Indoneshia. Ọnụ ọgụgụ a ji ihe karịrị okpukpu abụọ karịa ndị nkwusa e nwere n’Indoneshia. Ihe fọrọ obere ka o ruo puku mmadụ iri bịara mgbakọ e nwere na Jakata. Otu n’ime ndị bịaranụ bụ onye ọnụ na-eru n’okwu na Ngalaba Na-ahụ Maka Okpukpe n’Indoneshia. O juru nwoke a anya ịhụ ka ụmụaka na ndị okenye na-asapeta Baịbụl ha mgbe onye na-ekwu okwu kwuru ebe ọ chọrọ ịgụ. O kwere ụmụnna anyị nkwa na ya ga-eme ka ndị mmadụ mata na ebubo a na-ebo Ndịàmà Jehova abụghị eziokwu.
Iwu ahụ gọọmenti wepụrụ mekwara ka ndị ozi ala ọzọ laghachi n’Indoneshia. Ndị mbụ laghachịrịnụ bụ Nwanna Josef Neuhardt na nwunye ya Herawati * (sí Agwaetiti Sọlọmọn) na Nwanna Esa Tarhonen na nwunye ya Wilhelmina (sí Taịwan). Ndị ọzọ bụ Nwanna Rainer Teichmann na nwunye ya Felomena (sí Taịwan), na Nwanna Bill Perrie na nwunye ya Nena (sí Japan). Ndị ọzọ bịaranụ mgbe ndị a bịachara bụ ndị ka gụchara akwụkwọ n’Ụlọ Akwụkwọ Gilied. E zigara ụfọdụ na Kalịmantan, ziga ụfọdụ n’Ebe Ugwu Sumatra, n’Ebe Ugwu Sulawesi, nakwa n’obodo ndị ọzọ dị ha nso.
“Obi tọrọ m ụtọ inyere ndị bịara ụlọ akwụkwọ a aka ka ha mụtakwuo otú e si ezi ihe na otú e si ekwu okwu nke ọma.”—Nwanna Julianus Benig
N’afọ 2005, alaka ụlọ ọrụ haziri ka a na-enwe klas maka Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ozi (nke a na-akpọzi Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze) na Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Nlekọta Na-ejegharị Ejegharị. * Nwanna Julianus Benig, bụ́ onye so kụzie ihe n’Ụlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ozi kwuru, sị: “Obi tọrọ m ụtọ inyere ndị bịara ụlọ akwụkwọ a aka ka ha mụtakwuo otú e si ezi ihe na otú e si ekwu okwu nke ọma, nakwa otú ha ga-esi bakwuoro nzukọ Jehova uru.” Ọtụtụ ndị gara ụlọ akwụkwọ a bụzi ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche ma ọ bụ ndị nlekọta sekit. A zụbuola ọtụtụ ndị mbụ gara Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Nlekọta Na-ejegharị Ejegharị n’ọrụ sekit n’oge ahụ a machibidoro anyị iwu. Ụlọ akwụkwọ a nyeere ha aka ịrụ ọrụ ha nke ọma mgbe e wepụrụ iwu ahụ a machibidoro anyị. Nwanna Ponco Pracoyo, bụ́ onye gara klas nke mbụ, kwuru, sị: “Ụlọ akwụkwọ a nyeere m aka ịna-emetekwuru ndị mmadụ ebere, meekwa ka m na-arụ ọrụ m nke ọma otú onye nlekọta sekit kwesịrị isi na-arụ ọrụ ya. Ụlọ akwụkwọ a amaka, ọ gbakwara m ume!”
Igbo Mkpa E Nwere
N’afọ iri abụọ na ise ahụ a machibidoro anyị iwu n’Indoneshia, ọtụtụ ọgbakọ na-amụ ihe n’ụlọ ụmụnna. Ọtụtụ ọgbakọ enweghị ego ha ga-eji rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze nke ha. O sikwara ezigbo ike inweta ikike n’aka gọọmenti ka a rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ebe ọ bụ na a na-ehiwe ọgbakọ ndị ọhụrụ n’ike n’ike, alaka ụlọ ọrụ haziri ka e nwee Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ka ha leba anya ná mkpa a e nwere maka Ụlọ Nzukọ Alaeze.
Otu n’ime ebe ndị mbụ a rụrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze bụ n’Agwaetiti Nịas, dị́ n’Ebe Ugwu Sumatra. Nwanna Haogo’aro Gea, bụ́ onye nọterela aka n’ọgbakọ Gunungsitoli, kwuru ihe merenụ. Ọ sịrị: “Obi tọgburu anyị atọgbu mgbe anyị nụrụ na a na-aga ịrụrụ anyị Ụlọ Nzukọ Alaeze. Alaka ụlọ ọrụ ziteere anyị ụmụnna asaa ga-elekọta ọrụ ahụ. A rụchara ya n’afọ 2001.” Nwanna Faonasökhi Laoli, bụ́ onye so na kọmitii na-ahụ maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’ọgbakọ a kwuru, sị: “Tupu a rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze a, anyị na-anọbu n’ụlọ ụmụnna enwe ọmụmụ ihe, ndị obodo anyị na-eledakwa anyị anya. Ma, ozugbo a rụchara ya, ndị na-abịa ọmụmụ ihe anyị bịara si na mmadụ iri abụọ ruo mmadụ iri anọ. N’ime otu afọ a rụchara ya, ndị na-abịa ọmụmụ ihe anyị bịara karịa narị mmadụ abụọ. Ụlọ Nzukọ Alaeze a kacha ụlọ niile a rụrụ n’obodo anyị mma. Ndị obodo anyị na-akwanyeziri anyị ùgwù.”
Ihe a bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị dị na Bandọng
N’afọ 2006, ụmụnna anyị bí na Bandọng, dị́ n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Java, malitere ịchọ ala a ga-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze mbụ a ga-enwe n’obodo a. Nwanna Singap Panjaitan, bụ́ okenye so na kọmitii na-ahụ maka ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ kwuru, sị: “O were anyị otu afọ iji chọta ebe kwesịrị ekwesị anyị ga-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ma tupu ndị ọchịchị enye anyị ikike ịrụ ya, a ga-enwerịrị ma ọ́ dịghị ihe ọzọ mmadụ iri isii na-abụghị Ndịàmà Jehova ga-abịanye aka n’akwụkwọ ka anyị rụọ ya. Ma anyị nwetara mmadụ iri asaa na isii bịanyeere anyị aka. Otu n’ime ha bụ otu nwaanyị a ma ama n’obodo ahụ. Nwaanyị a anabughị achọ iji anya ahụ anyị. Mgbe anyị rụchara Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ, anyị kpọrọ ndị agbata obi anyị na onyeisi obodo ahụ ka ha bịa kirie ya. Onyeisi ahụ kwuru, sị: ‘Chọọchị niile kwesịrị ime ka ụlọ chọọchị ha na-adị ọcha otú a Ụlọ Nzukọ Alaeze unu dị.’” E nyefere Jehova Ụlọ Nzukọ Alaeze a dị otu okpukpu n’afọ 2010.
Kemgbe afọ 2001, a rụọla ihe karịrị otu narị Ụlọ Nzukọ Alaeze n’Indoneshia. A ka chọkwara ọtụtụ.
^ para. 3 Akụkọ ndụ Nwanna Nwaanyị Herawati Neuhardt gbara na Teta! Eprel 2011.
^ para. 1 Ihe a na-akpọzi ụlọ akwụkwọ a ugbu a bụ Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Nlekọta Sekit na Nwunye Ha.
Ozi Ọma Ebiri Ọkụ n’Indoneshia